नयाँ प्रकाशनहरू – Page 2
भाग्य तपाईंको मुट्ठीमा
मूल्य रु. २००/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “भाग्य तपाईंको मुट्ठीमा” स्वेट मार्डेनद्वारा रचिएको र दिपेन्द्र शाहद्वारा अनुवादित जीवनोपयोगी पुस्तक हो।पुस्तकबाट साभार:“भाग्य एक अदृश्य ‘लिपि’ हो। लक्ष पूरा गर्नको लागि आफ्नो समस्त शक्ति तत्त्वद्वारा परिश्रम गर्नु ‘पुरुषार्थ’ हो। भाग्य शरीर हो भने पुरुषार्थ शरीरमा अन्तर्निहित शक्ति तत्त्व हो, जसले भाग्य निर्माण गर्छ। योगवशिष्ठमा…
मूल्य रु. २००/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “तनावरहित जीवन” स्वेट मार्डेनद्वारा रचिएको र दिपेन्द्र शाहद्वारा अनुवादित जीवनोपयोगी पुस्तक हो।पुस्तकबाट साभार:“चिन्तित व्यक्ति हरेक समय व्यस्त रहनुपर्छ नत्र ऊ निराशाबाट बच्न सक्दैन। संसारमा आधाभन्दा बढी संकट स्वाभिमानमा ठेस, अभद्रता तथा मिथ्याभिमानको भावको कारण पैदा हुन्छ। तर याद राख्नुस्, जीवन तुच्छ कुरामा अल्झिरहनका लागि होइन।”“यस…